चिकित्सा शिक्षाको बेथिति | eAdarsha.com
चिकित्सा शिक्षाको बेथिति
१. सरकारले चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान विकृति र विसंगति हटाउनु पर्ने माग राखी वरिष्ठ चित्सक गोविन्द के.सी.ले गरेको आमरण अनशनको वास्ता गरेन। सरकारले कुनै पनि हालतमा उनको माग पूरा नगर्ने भएको र आमरण अनशनकर्ता के.सी.को स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक हुँदै गएकाले नागरिक अधिकार कर्मीहरूको आग्रहमा उनले आफ्नो अनशन तोडे। उनले अब संघर्ष अर्कै किसिमले गर्ने घोषणा गरे।
२. त्यसबेला यस्तो स्थिति देखापर्यो कि सरकारले जित्यो। गोविन्द के.सी.ले हारे। त्यस अघिको उनका अनशनहरूले तत्कालीन सरकारहरूबाट केही न केही आश्वासन, प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्ने गरेका थिए। सहमति र सम्झौता हुने गरेका थिए। आमरण अनशनमा शक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको थियो।
३. प्रजातन्त्रमा, लोकतन्त्रमा अनशनले नैतिक शक्ति प्रदान गर्दछ। मानिसले त्यसै आफ्नो शरीरलाई दुःख यातना दिँदैन। जसले देश र समाजका लागि आमरण अनशन बस्दैछ, त्यो ठूलो कुरा हुन्छ। त्यसलाई सरकारले सहानुभूतिपूर्वक लिनु पर्दछ। त्यसमा सर्वसाधारणको पनि समर्थन सम्मिलित रहेको हुन्छ।
४. तर यो सरकारले डा. के.सी.को आमरण अनशनलाई निर्ममतापूर्वक दबायो, जनसमर्थनको पनि सम्मान गर्न सकेन। सरकारले त्यसबेला निश्चय नै विजय प्राप्त गरेको देखियो। त्यसबेला उनको मागलाई वास्ता नगर्दा आज त्यसको परिणाम यत्रतत्र देखिन थालेका छन्। चिकित्सा शिक्षामा बेथिति भएको व्यहोराहरू प्रष्ट बाहिर आएका छन्।
५. शिक्षण अस्पतालहरूमा एक पछि अकोर्मा विवाद उत्पन्न भएको छ। शिक्षण अस्पतालका मालिकहरूले जथाभावी विद्यार्थीहरूबाट पैसा असुल्न थालेका छन् भने विद्यार्थीहरूले बन्द र हडतालद्वारा आफनो पीरमर्का व्यक्त गर्नु पारिरहेको छ। चिकित्सा शिक्षाजस्तो संस्था लामो समय बन्द रहनु नराम्रो कुरा हो तर जुन नराम्रो भन्छौँ, आज त्यही भइरहेको छ।
६. विद्यार्थी र अस्पतालका मालिकहरू बीच पटकपटक वार्ता भए, तर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। स्थानीय प्रशासन समेतको उपस्थितिमा पनि वार्ता भए। विश्वविद्यालयबाट टोली आएर पनि मिलाउने प्रयास गर्यो। तर कुनै परिणाम निस्केको छैन। अभिभावकहरूलाई विद्यार्थीको भविष्य बिग्रने हो कि भन्ने शंका लाग्न थालेको छ। सरकारले गोविन्द के.सी.लाई जित्यो तर अस्पतालको बेथितिलाई जित्न नसकेका प्रमाणहरू यत्रतत्र घटन थालेका छन्।
७.चिकित्सा शिक्षा भनेको महत्वपूर्ण शिक्षाहो यो शिक्षा मानिसको ज्यूज्यानसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसकारण यो शिक्षा स्तरीय हुनुपर्दछ। बन्द हडतालको घटनाले गुणस्तरीय शिक्षामा अवरोध खडा गर्दछ। विद्यार्थीहरूले जुन मागहरू राखेर शिक्षण अस्पतालहरू बन्द गर्दैछन्। त्यसलाई सहानुभूतिपूर्वक लिनु पर्दछ। उनीहरूको जायज माग तुरुन्त पूरा गर्नु पर्दछ। शिक्षण अस्पतालले लामो समय बन्द गर्नु हुँदैन। सम्बन्धित पक्षहरूले तुरुन्त वार्ताको टेबुलमा बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ।